Deg Deg::Dagaal Culus Oo Dhexmaray Alshabab iyo Ciidanka Dawladda – KHAATUMO NEWS
Deg Deg::Dagaal Culus Oo Dhexmaray Alshabab iyo Ciidanka Dawladda
Dagaalyahano aad u hubeesan oo katirsan Al Shabaab ayaa weerar culus ku qaaday saldhigyo ciidanka dowlada federaalka Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya kaga sugnaayeen duleedka Degmada Garbahaarey ee xarunta gobolka Gedo.
Dagaal xoogan oo saacado badan socday ayaa dhax maray dagaalyahanada Al Shabaab iyo ciidamada huwanta ah, waxaana daryanka hubka culus iyo madaafiicda labada dhinac is dhaafsanayeen si weyn looga maqlayay degmada Garbahaarey.
Wali lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalka culus ee labada ciidan dhax maray, waxaana saraakiil u hadashay dowlada iyo Al Shabaab mid kastaahi dagaalka ka sheegteen guulo wax ku ool ah.
Al Shabaab ayaa weeraro culus ku qaada saldhigyada ay gobolada dalka ka joogaan ciidamada dowlada federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM , waxaana weeraradaasi uu khasaaro kasoo gaaraa dhinacyada dagaalama.
Previous Post: Daawo:Gabadh Reer Burco Ah Oo Su aal Halis ah cali khaliif Hor Dhigtay.
Next Post: Deg Deg:Turkiga oo xabsiga dhigay labo ruux oo Imaaraadka u dhashay